Olympus OM-D E-M10 Mark III, retro taabashada oo ku habboon safarka | War gadget
Kaamirooyinka muraayadda aan lahayn ee 'Olympus' u istaag taabashadaas gadaal; muuqaal caadi ah oo caan ku ah bulshada guud. Shirkaddu way ogtahay tan xariiqda qalabka cusubi wuu socdaa. Sidaa awgeed muuqaalka cusub Olympus OM-D E-M10 Mark III noqo mid la yaqaan sidii labadii fac ee hore.
Kadib sanadihii uu ku sugnaa suuqa Olympus OM-D E-M10 Mark II dhaxalkiisa horey ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay. Iyo in si daacad ah loo hadlo, isbedelada sidoo kale ma muuqdaan. Dabcan, way sii socotaa mid ka mid ah moodooyinka ugu fiican ee lagu safro iftiinka (jirkaaga wuxuu helayaa culeys dhan 362 garaam) natiijooyin fiicana waad heleysaa.
Olympus OM-D E-M10 Mark III wuxuu soo bandhigayaa processor-kii ugu dambeeyay ee shirkadda: TruePic VIII. Sidoo kale, dareeraha aad ka heli doontid waa a 16 megapixel Live MOS iyo 5-dhidibka xasilinta sawirka. Dhanka kale, si ka duwan tartamayaasha kale (qaar Fujifilm ama qaar ka mid ah Sony), qaabkani wuxuu leeyahay aragti indha-indheeye. Si aad u sii faahfaahsan tahay, waxay leedahay 2,36 milyan oo qodob oo xallin ah.
Dhinaca kale, xagga dambe, marka lagu daro in xoogaa kontaroolo ah, shaashadda LCD ayaa sidoo kale ku taal. Jaantus kan ayaa ah 3 inji waana taataabasho buuxda. Isla shirkadda ayaa isbarbar dhig ku samaysay maaraynta ay leedahay a smartphone. Autofocus kamaraddaan Olympus waxay taabaneysaa 121 aag.
Marka laga hadlayo fursadaha duubista fiidiyowga, Olympus OM-D E-M10 Mark III wuxuu awood u leeyahay inuu ku helo clips-ka xalka 4kSidee mooddo waa, xawaare ugu sarreeya 30 fps. Waxa kale oo suurtogal ah in la helo qaraxyo ilaa 8,6 fps ah, oo aan haba yaraatee wax xun ahayn.
Ugu dambeyntii, xamuul ah baytarigeeda ayaa kuu oggolaanaya inaad qaadatid illaa 330 tallaal oo sawirrada oo dhan waa lagu wadaagi karaa khadka WiFi. Olympus OM-D E-M10 Mark III ayaa la iibin doonaa bartamaha bishaan Sebtember. Waxaa lagu heli doonaa laba nooc: madow ama qalin. Sidoo kale, waxaad heli kartaa oo keliya jirka 649 euro. Ama, dooro labo xirmooyin lens oo isku xirxirmay: jirka oo lagu daray M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm 1: lens-ka 3.5-5.6 II R 699 euros; halka xirmada labaad ay tahay: jirka oo lagu daray M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm 1: 3.5-5.6 EZ pancake lens a 799 euros.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Sawir iyo dhawaq » Sawir » Olympus OM-D E-M10 Mark III, retro taabashada oo ku habboon safarka